ကို C ကော်ပိုရေးရှင်းအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ vs. S ကိုကော်ပိုရေးရှင်း
ကို C ကော်ပိုရေးရှင်း vs. S ကို Corporation
တစ်ခုက S ကော်ပိုရေးရှင်း (ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဖှဲ့အစညျးရဲ့အစည်းအဝေး၏ IRS ကိုလိုအပ်ချက်များကိုပြည်တွင်းအခွန်များကျင့်ထုံး၏ Subchapter S ကိုအောက်မှာအခွန်ကောက်ခံရဖို့ကဲ့သို့သောအမည်ရှိ) ကို subchapter S ကိုအခွန်ရွေးကောက်ပွဲက pass အဖြစ်ကုသခံရဖို့အဘို့အလို့ငှာဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးအရာများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် နေဆဲပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်တူညီသောကာကွယ်မှုပေးနေချိန်မှာအများကြီးသူ၏ဝင်ငွေသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှု (ကုမ္ပဏီအတွက်သူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုတိုက်ရိုက်အချိုးအစားမှာ) တစ်ဦးချင်းစီရှယ်ယာရှင်များ '' ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခွန်ပြန်ဖို့ "ဖြတ်သန်း" ဟုမိတ်ဖက်များကဲ့သို့အခွန်ရည်ရွယ်ချက်များ, များအတွက် -through entity နှင့် ရိုးရာကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ် liabilities ကနေ။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များမသက်ဆိုင်ဝင်ငွေအမှန်တကယ်ဖြန့်ဝေနေသည်ဖြစ်စေမ၏, ထို S ကိုကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဝင်ငွေပေါ်တွင်အခြေခံပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကအစဉ်အလာကော်ပိုရေးရှင်း (သို့မဟုတ် "ကို C" ကော်ပိုရေးရှင်း) ကမွေးရာပါကြောင်း "နှစ်ဆအခွန်ကောက်ခံမှု" ကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဗိုလ်မှူး Difference - ကို C ကော်ပိုရေးရှင်း vs. S ကိုကော်ပိုရေးရှင်း
သောကြောင့်ယင်း၏အခွန်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ "ဖြတ်သန်း" ၏, ထို S ကိုကော်ပိုရေးရှင်းကော်ပိုရေးရှင်းအဆင့်မှာအခွန်မှဘာသာရပ်မရှိ, ဤအရပ်မှ (စံသို့မဟုတ်ရိုးရာကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်, စီးပွားရေးဝင်ငွေပထမဦးဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းအဆင့်မှာအခွန်ကောက်တာဖြစ်ပါတယ် "နှစ်ဆအခွန်ကောက်ခံမှု" ၏ထောငျခြောကိုရှောင် ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီရှယ်ယာရှင်များဖို့ကျန်နေတဲ့ဝင်ငွေ၏ဖြန့်ဖြူးပုဂ္ဂိုလ်ရေး "ဝင်ငွေ" အဖြစ်ကိုတဖန်အခွန်ကောက်သည်) ကို C ကော်ပိုရေးရှင်းတို့၌ဖြစ်သည်။
15.00% ၏ဖက်ဒရယ်မှုနှုန်းမှာအခွန်ကောက်ထားတဲ့ကို C ကော်ပိုရေးရှင်းခွဲဝေမတူဘဲ, S ကိုကော်ပိုရေးရှင်းခွဲဝေ (သို့မဟုတ်ပိုပြီးစနစ်တကျအမည်ရ "ဖြန့်ဖြူး") ကိုရှယ်ယာရှင်ရဲ့မဖြစ်စလောက်အခွန်နှုန်းအခွန်ကောက်နေကြသည်။ သို့သော်က c ကော်ပိုရေးရှင်းမြတ်များအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောကို double-အခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကမြတ်များအဖြစ်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီရှယ်ယာရှင်များမှထုတ်ပေးသည့်အခါပြီးတော့ဝင်ငွေအဖြစ်အခွန်ကောက်မီဝင်ငွေပထမဦးဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းအဆင့်မှာအခွန်ကောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, Cogs Inc မှ, အသားတင်ဝင်ငွေအတွက် $ 20 သန်းကိုတွမ်အားဖြင့်ဂျက်နှင့် 51% အားဖြင့် 49% ပိုင်ဆိုင်သည်, တစ်ဦးက S ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဂျက်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခွန်ပြန်လာတွင်သူသည်ဝင်ငွေအတွက် $ 10.2 သန်းသတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်နဲ့ Tom $ 9.8 သန်းသတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်။ (အများစုပိုင်ရှင်အဖြစ်) ဂျက်ပိုက်ကွန်ဝင်ငွေအမြတ်အစွန်းဖြန့်ဝေဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်တစ်ဦးဖြန့်ဝေကြောင်းထုံးစံအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဆိုပါကအဖြစ်, ဂျက်နဲ့ Tom နှစ်ဦးစလုံးတုန်းပဲမဆိုငွေသားဖြန့်ဖြူးလက်ခံရရှိသော်လည်း, ထိုင်ငွေအပေါ်အခွန်အဘို့အထိုက်ကြလိမ့်မည်။ ဒါကလူနည်းစုဖက်ထွက်အတင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုများတွင်အသုံးပြုနိုင်မယ့်ကော်ပိုရေးရှင်း "ညှစ်-ကစား" ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုက S Corporation ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များ
S ကကော်ပိုရေးရှင်း status ကိုထားရှိခြင်းသည်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အနည်းငယ်သိသိသာသာအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ပေးပါသည်။ ပထမဦးစွာနဲ့ဗွေဆော်, သင်တန်း, ရှယ်ယာရှင်များဆန့်ကျင်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုရရှိ, ဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဥပဒဝတ်စုံများ၏သက်ရောက်မှုလျော့ပါးစေရန်၏ရည်မှန်းချက်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီရှယ်ယာရှင်များမြှုတ်ကြွေးမြီ၏အခြားပုံစံများ, ဖြစ်တယ်, တစ်ဖွဲ့လုံးကကော်ပိုရေးရှင်းထိခိုက်သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်, သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းစီအဖြစ်ရှယ်ယာရှင်များအရာကြွင်းလေ။ ဤပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကြိုးရိုးရာကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် S ကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ဦးစလုံး၏မှန်သည်။ တစ်ခုက S ကော်ပိုရေးရှင်း၏ရွေးချယ်ရေးပိုမိုတိကျတဲ့အဆိုပါ pass-မှတဆင့်အခွန်အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကန့်သတ်မယ့်ကော်ပိုရေးရှင်း S ကိုကော်ပိုရေးရှင်းအဆင့်အတန်းများအတွက် IRS ကိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ရှိနိုငျသောရှယ်ယာရှင်များ၏ပမာဏအဖြစ်ရှိပါတယ်နေစဉ်, အရွယ်အစားတံခါးခုံကို fit ကြောင်းအများဆုံးကော်ပိုရေးရှင်း (ရှယ်ယာရှင်များ 75 မှ 100 ထက်အများဆုံးကိစ္စများတွင်ပိုမိုမဟုတ်) ဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက် ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီရှယ်ယာရှင်များစီးပွားရေးဝင်ငွေပိုကြီးတဲ့ဖြန့်ဖြူးဝင်ငွေခွင့်ပြုဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုက S ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်အခွန်ကောက်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းရှယ်ယာရှင်များထံသို့တိုက်ရိုက်ဝင်ငွေ pass နှင့်နေဆဲကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏အားသာချက်များကိုခံစားနေစဉ်, အများပြည်သူကုမ္ပဏီများသည်၏ရလဒ်ကိုနှင့်အတူမွေးရာပါကြောင်းနှစ်ဆအခွန်ကောက်ခံမှုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
S ကကော်ပိုရေးရှင်း status ကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်အခွန်တာဝန်ယူမှုကိုသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ S က status ကိုရှယ်ယာရှင်များတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေအခွန်ပြန်မှကုမ္ပဏီအမြတ်အစွန်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုလျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ S က status ကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ရန်အလို့ငှာ, တဦးတည်းပထမဦးဆုံးအထွေထွေကို C ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ IRS ကိုပုံစံ 2553 file ရမည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျမကြာသေးမီကထည့်သွင်းခဲ့ကြပါလျှင်, သင့်ကော်ပိုရေးရှင်းသင့်ရဲ့ဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်ရက်စွဲ၏ 75 ရက်အတွင်းအချိန်မရွေးအခွန်နှစျအတှငျး S က status ကိုအဘို့အဖွင့်နိုင်ပါသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းကလက်ရှိအခွန်တနှစ်အဘို့အကျိုးသက်ရောက်ယူရွေးကောက်ပွဲများအတွက်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ပြက္ခဒိန်တစ်နှစ်လျှင်အခွန်ထမ်းလျှင်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီ action ကိုမတ်လ 15 ယူရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကကော်ပိုရေးရှင်းအကြာတွင်ရွေးကောက်ခံ S ကိုကော်ပိုရေးရှင်း status ကိုဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကအောက်ပါနှစ်တိုင်အောင်အကျိုးသက်ရောက်ယူမှာမဟုတ်ဘူး။
passive ဝင်ငွေတစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုဝင်ငွေဖြစ်၏ ဆိုလိုသည်မှာစတော့ရှယ်ယာ, ငွေချေးစာချုပ်များ, သာတူညီမျှ-type အမျိုးအစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ, အိမ်ခြံမြေ, etc Active ကိုဝင်ငွေစသည်တို့ကိုပြန်ဆိုန်ဆောင်မှုများ, ရောင်းချခဲ့ထုတ်ကုန်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသင့်ရဲ့ S ကိုကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ passive ဝင်ငွေကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့စုစုပေါင်းလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏ 25% ထက်မကျော်လွန်ပါဘူးသေချာစေရန်အရေးကြီးပါသည် တစ်ဆက်တိုက်သုံးနှစ်တွင်ကာလအတွင်း; မဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်း IRS ကိုအားဖြင့်ရုတ်သိမ်းက၎င်း၏ S က status ကိုရှိခြင်း၏အန္တရာယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြား passive ဝင်ငွေရှိသည်ဖို့မြျှောလငျ့ထားလျှင်တစ်ဦးကပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခု LLC ဖြစ်နိုင်သည်။
S ကကော်ပိုရေးရှင်း status ကိုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်ရန်အတွက်အနည်းငယ်လိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေ့ဆုံခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ 1 ။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအထွေထွေများအတွက်အကျိုးအမြတ်ကို C class ကိုကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားရပါမည်။2။ သင့်ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းမှသာစတော့ရှယ်ယာများထဲမှလူတန်းစားထုတ်ပေးတော်မူကြောင်းကိုသေချာစေပါ။3။ လူအားလုံးတို့သည်ရှယ်ယာရှင်များကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားများသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်။4။ 75 ရှယ်ယာရှင်များထက်မပိုရှိနိုငျပါသညျ။5။ သင့်ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ passive ဝင်ငွေအဆင့်အထိစုစုပေါင်းလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများန့်သတ်ချက်များ၏ 25% မလွန်ပါဘူး။6။ သင့်ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းဒီဇင်ဘာလ 31 ထက်အခြားတစ်ဦးအခွန်နှစ်အဆုံးနေ့စွဲရှိပါတယ်လျှင်သင် IRS ကိုထံမှခွင့်ပြုချက်များအတွက် file ရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းအားလုံးအထက်ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်, သငျသညျကို S status ကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ရန်အ IRS ကိုနှင့်အတူပုံစံ 2553 file လိမ့်မည်။
တစ်ဦးကလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ ( "အဖွဲ့ဝင်များက" အဖြစ်ရှိသည်) ကော်ပိုရေးရှင်းအခြား LLC ရဲ့မိတ်ဖက်, ယုံကြည်မှုနှင့် Non-အမေရိကန်နိုင်ငံသားမဟုတ်သောနေထိုင်သူဂြိုလ်သားပိုင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ S ကိုကော်ပိုရေးရှင်း, အခြားတစ်ဖက်တွင်, သာတစ်ဦးချင်းစီကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားများသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဂြိုလ်သားကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုက S ကော်ပိုရေးရှင်းမှသာစတော့ရှယ်ယာများထဲမှလူတန်းစားပူဇော်စေခြင်းငှါနေစဉ် LLC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့် / အတန်းပူဇော်စေနိုင်သည်။ တစ်ခုက LLC အဖွဲ့ဝင်မဆိုအရေအတွက်အားရှိစေခြင်းငှါပေမယ့်တစ်ဦးက S ကော်ပိုရေးရှင်း (ကဖွဲ့စည်းခဲ့ထားတဲ့အတွက်ပြည်နယ်များ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပေါ် မူတည်. ) 75 ရှယ်ယာရှင်များမှ 100 ဦးရေအများဆုံးကန့်သတ်သည်။ တစ်ခုက S ကော်ပိုရေးရှင်း၏ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးပုဂ္ဂိုလ်ရေး (မစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု) တွင်တရားစွဲသောအခါတရားစွဲဆိုမှု, စတော့ရှယ်ယာများ၏ရှယ်ယာသိမ်းဆည်းရမိစေခြင်းငှါအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦး LLC ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတစ်ဦး (မစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတရားစွဲဆိုမှုအတွက်တရားစွဲဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, တစ်ဦးချင်းစီကနေခေါ်ဆောင်သွားခံရခြင်းကနေအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရှယ်ယာကာကွယ်ပေးရန်ပြဌာန်းချက်ရှိပါတယ်။
တစ်ခုက S ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူစဉ်းစားကြည့်ပါရန်ဥပဒေရေးရာကိစ္စများ
သေချာစေရန်, တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုက S ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်ကုသနိုင်ပါတယ်မတိုင်မီတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအခြို့သောစည်းမျဉ်းခြေလှမ်းများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာရှိပြီးသားကော်ပိုရေးရှင်း (သို့မဟုတ်အသစ်တခုကော်ပိုရေးရှင်းများ၏မူရင်း) ၏ရှယ်ယာရှင်များ၏ 2553th နေ့ကရှေ့မှာရွေးကောက်ပွဲ IRS ကို Form ကို 16 တခုတခုအပေါ်မှာ S ကိုကော်ပိုရေးရှင်း (နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းထည့်သွင်းခဲ့သည့်အတွက်ပြည်နယ်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာပုံစံ) ဖြစ်စေရမယ် တတိယလရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိအခွန်တစ်နှစ်ထိရောက်သောဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, C ကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်ယခုနှစ်အနီးကပ်အောက်ပါ။ အဆိုပါကို C ကော်ပိုရေးရှင်းသူတို့အား21 /2လအတွင်းသူတို့အား21 /2လအတွင်းအပေါင်းတို့နှင့်ရှယ်ယာရှင်များကာလအတွင်းတစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်မီကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီရမည်ဖြစ်သည်သူတို့ကရွေးကောက်ပွဲအချိန်တွင်စတော့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ကြဘူးလျှင်ပင်သဘောတူရမည်ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲအခွန်တစ်နှစ်၏တတိယလ 15th တစ်နေ့ပြီးတင်သွင်းလျှင်, ရွေးကောက်ပွဲကိုလာမည့်အခွန်တနှစ်အဘို့အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်နှင့်ရွေးကောက်ပွဲများ၏အချိန်မှာအားလုံးရှယ်ယာရှင်များသဘောတူရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ခုက S ရွေးကောက်ပွဲမိမိဆန္ဒအလျောက်ရပ်စဲမူရင်းရွေးကောက်ပွဲကိုစနစ်တကျတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရှိရာန်ဆောင်မှုစင်တာကိုအတူကြေညာချက်ဖြည့်စွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကရုပ်သိမ်းခြင်းကိုသာအချိန်မရွေးရုပ်သိမ်းခြင်းကော်ပိုရေးရှင်း၏ (nonvoting စတော့ရှယ်ယာအပါအဝင်) စတော့ရှယ်ယာများ၏ထုတ်ပေးနှင့်ထူးချွန်ရှယ်ယာအရေအတွက်တစ်ဦးထက်ပို-တစ်ဝက်ကိုင်ထားလုပ်သူ, ရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါကြေညာချက်တွင်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီးဤအချက်အလက်စည်းမျဉ်းများအပိုင်း 1.1362-6 (က) (3) နှင့် IRS ကို Form ကို 1120S တစ်ဦးက S ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အမေရိကန်ဝင်ငွေခွန်ပြန်သွားဘို့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာဖော်ပြထားကြောင်းတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များရှိပါသည်။
အဆိုပါရုပ်သိမ်းခြင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးကရုပ်သိမ်းခြင်းတင်သွင်းနေသည်ရက်စွဲပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပြီးနောက်ဖြစ်ပါသည်အဖြစ်ထိရောက်သောရက်စွဲဖော်ပြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမနေ့စွဲသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်နှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းအခွန်တစ်နှစ်၏တတိယလ 15th နေ့ကမတိုင်မီတင်သွင်းလျှင်, ရုပ်သိမ်းခြင်းလက်ရှိအခွန်တစ်နှစ်ထိရောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါရုပ်သိမ်းခြင်းအခွန်တစ်နှစ်၏တတိယလ 15th တစ်နေ့ပြီးတင်သွင်းလျှင်, ရုပ်သိမ်းခြင်းလာမည့်အခွန်တစ်နှစ်ထိရောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ ။
ငါက S ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်အကြှနျုပျ၏လုပ်ငန်း Organize သငျ့သလော
သငျသညျအနညျးငယျရှယ်ယာရှင်များထက်ပို (သို့သော်သင့်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီပြည်နယ်အတွက်ကန့်သတ်သည်ထက်နည်း) ရှိသည်ဖို့သင့်ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာက "အခွန်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်အလားအလာထောငျခြောကိုနားလည်နေချိန်တွင်သင်သည်ဖြတ်သန်းခြင်းအခွန်၏အကျိုးကျေးဇူးများတန်ဖိုးထားနိုင်လျှင် ဖြန့်ဖြူးခြင်း, "နှင့်သငျသညျအထကျဖျောပွထားသညျ့ဥပဒေလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း, ထို့နောက် S ကိုကော်ပိုရေးရှင်းညာဘက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှသင်၏လုပ်ငန်းအမြတ်အစွန်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအောင်ကိုဦးတည်နေတဲ့ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားနိုင်သည်!
က S-ကော်ပိုရေးရှင်း vs LLC
အဓိပ္ပာယ် & ဥပမာ - တစ်ဦးအကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်း / ကော်ပိုရေးရှင်း Start လုပ်နည်း